မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရစရာရှိပါ့မလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရစရာရှိပါ့မလား
Posted by etone on Jul 13, 2011 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy, Short Story | 47 comments
မလိုလားတဲ့ အချိန် ..ကိုယ်ဝန်မရအောင် ကာကွယ်ပါ ...
ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေ ကလေးအရွယ်မှ တဆင့် တစ်စတစ် ကြီးပြင်းလာချိန် အပျိုဖော်ဝင်စ အချိန်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါတယ် ။ မိန်းမတိုင်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ဖူးတာမို့ အထူးတလည် ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး … ။ အပျိုဖော်ဝင်ချိန် ရာသီသွေးဆင်းခြင်းဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ရန် အသင့် အနေထားဖြစ်ပြီလို့လည်း သတ်မှတ်လုိ့ရပါတယ်… ။ ဒီလို စပ်ကူး မတ်ကူး အချိန်လေးတွေမှာ ကလေးဘ၀တုန်းကလိုမဟုတ်ပဲ … လောကကြီးကို ဘောင်ခတ်ကြည့်ချင်လာတယ် ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လာတယ် ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားတယ် … ဒီလိုပါပဲ … ဟော်မုန်းတွေ မညီမျှတာကြောင့် ၀က်ခြံတွေထွက်မယ် … ဆံပင်ကြမ်းမယ်… အသားရည်ပြောင်းလဲလာမယ်.. စတာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပဲ … ။ မတော်တဆရသွားတဲ့ ကိုယ်ဝန်တွေ ရှိနိုင်တဲ့ အတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ဗဟုသုတတွေ နဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါတယ် ….။
သားဆက်ခြားချင်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေလည်း သိသင့်ပါတယ်… ။ သားဆက်ခြားနည်းတွေ မျိုးစုံရှိပါတယ် … ။ အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း … အကာကွယ်ပစ္စည်း( ကွန်ဒုံး ) သုံးပြီး ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ပါဘူး … သို့သော်လည်း … အလွှာပါးပေမဲ့ ကမ္ဘာခြားသလိုပဲ ဆိုတဲ့ လူတွေ အတွက်ကတော့ ထိုနည်းက အဆင်မပြေပါဘူး … ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့နေရာမှာလည်း …အသုံးပြုနိုင်တဲ့ သက်တမ်းရက်စွဲနဲ့ … တပ်ဆင်အသုံးပြုပုံတွေ စနစ်တကျ မှန်ကန်ရပါမယ် … ။ အံ့ဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမယ့် ဆိုက်ကိုလည်း ရွေးချယ်သင့်တယ် … မဟုတ်လျှင် ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲပြီး မတော်တဆ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တာမို့ပါ … ။ နောက်တနည်းနဲ့ သားဆက်ခြားလို့ ရပါသေးတယ်… ဒါကတော့ ဆေးကဒ်တွေ သောက်တာပါ … ဈေးကွက်ထဲမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ၀ယ်လို့ ရနေပေမဲ့ … သုံးစွဲပုံသုံးစွဲနည်းနဲ့ ရက်လွန်ဆေးမဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် … တစ်ချို့ဆေးတွေဆို သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးပြီဖြစ်လို့ အာနိသင်မရှိတော့တဲ့အခါ သောက်နေလျှက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ် … ။ ဆေးအချို့က နေ့စဉ် မှန်မှန်သောက်ရတာ ဖြစ်လို့ … ပျက်ကွက်မေ့လျှော့တဲ့ အခါ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ် … ။
ဆေးသောက်ရမှာလည်း မေ့လျှော့နေတယ် … အကာကွယ်ပစ္စည်းလည်း မသုံးချင်သူတွေ အတွက် နောက်တနည်းရှိပါသေးတယ် … ဆေးထိုးတဲ့နည်းပါ … လောလောဆယ် ဈေးကွက်ထဲ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေကြတာတော့ သုံးလဆေးနဲ့ တစ်လဆေးပေါ့ … ။ တစ်လဆေး ထိုးထားတဲ့လူတွေကတော့ ပုံမှန် လစဉ် ရာသီပြန်ပေါ်ပေမဲ့ …ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်… တစ်လတစ်ခါသာ မှန်မှန် သွားထိုးယုံပါပဲ… ။ သုံးလဆေးကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တယောက်မတူညီကြပါဘူး … တစ်ချို့ဆို ဆေးထိုးထားတဲ့ သုံးလအတွင်းရာသီသွေးမပေါ်သလို …. တစ်ချို့ကျတော့လည်း … သုံးလအတွင်း လစဉ်သော်လည်းကောင်း … တစ်လသော်လည်းကောင်း ရာသီပြန်ပေါ်တတ်ပါတယ် … ။ သုံးလဆေးရော ၊ တစ်လဆေးပါ … ဆေးထိုးရမဲ့ရက် ကျော်လွန်လို့ မရပါဘူး …နောက်တကြိမ်ထိုးရမဲ့ ရက်ကျော်လွန်လျှင် … ကလေးရသွားနိုင်လို့ပါ … ။ သုံးလဆေးထိုးပြီး ရာသီမပေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက်ကတော့ …. ကလေး ယူဖို့ ဆေးရပ်ပစ်လိုက်လျှင်တောင် ရာသီပြန်ပေါ်ဖို့ အချိန်ပေးပြီး စောင့်စားရပါတယ်… ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အခြေနေခြင်း မတူလို့ စောင့်စားရတဲ့ အချိန် ကွာခြားပါတယ် … ။ နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက သုံးလဆေးတွေ ၊ တစ်လဆေးတွေ ထိုးတဲ့ အခါ မခြေမိဖို့ပါပဲ … ။ နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကတော့ မချေရန် မှာကြားသော်လည်း … အချို့မှာ ချေရ ၊ မချေရ သေချာ မသိပါဘူး … ။ မချေစေချင်တာက တခြား ဆေးတွေနဲ့ မတူပဲ ဆေးခဲ၊ဖုမနေနိုင်တာရယ် …ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကနေ … တစိမ့်စိမ့်ကိုယ်ထဲပြန့် နှံ့အောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့လည်း … မှတ်သားဖူးခဲ့တယ် … ။
နောက်တနည်းကတော့ လက်မောင်းထဲ ခွဲပြီး ဆေးပစ္စည်းထည့်တဲ့နည်းပါပဲ… ဆေးပစ္စည်းလေးက ဈေးကြီးလို့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလောက်သာ သုံးကြပါတယ်…သူကလည်း ငါးနှစ်အထိ သက်တမ်းရှိပါတယ်… ။ လက်မောင်း အရေပြားကို ခွဲပြီး မြှုပ်ထားရတာပါ … ။
ကလေးလိုချင်တဲ့အချိန်လက်မောင်းထဲကနေ ပြန်ထုတ်လိုက်ယုံပါပဲ …။ နောက်တနည်းကတော့ သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်တာပါ …IUD လုိ့ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ … ။ နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများက ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးပါတယ် … သူ့ရဲ့ သက်တမ်းကလည်း ငါးနှစ်ထိခံပါတယ်… ဒါပေမဲ့ …ပစ္စည်းလေး ကိုယ်ထဲ ရှိနေမနေ စမ်းသပ်ရမဲ့ အချက်ကတော့ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရမှာပါ …။ ပစ္စည်းလေးကို သားအိမ်ထဲ တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန် …ပစ္စည်းလေးမှာ ပါတဲ့ ကြိုးမျှင်လေးကို တန်းလန်းချထားရပါတယ်… ။ ရာသီသွေးပေါ်ပြီးနောက်ရာက်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းထဲ လက်ထည့်ပြီး …. စမ်းရမှာပါ … ကြိုးစလေး စမ်းမိပြီဆိုလျှင် ပစ္စည်းလေး သားအိမ်တွင်းမှာ ရှိသေးလို့ ကာကွယ်လို့ ရတုန်းပါပဲ … ။ ပစ္စည်းလေးဟာ သေးငယ်လွန်းလို့ … ရာသီသွေးနဲ့ အတူရောဆင်းသွားတာ မသိလိုက်လျှင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တာမို့ … စမ်းသပ်စစ်ဆေးရတာပါ … ။ တချို့ စက်မှူဇုံတွေမှာ စီမံချက်အနေနဲ့ အခမဲ့ ထည့်ပေးပါတယ်… ပစ္စည်းထည့်ခြင်းကိုလည်း …မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းက သင်တန်းပို့ချအောင်မြင်ပြီး သူများကသာ ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ … ။ ပစ္စည်းထည့်ပြီး စိတ်ခံစားမှူ တစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာလျှင် … ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်လို့ ရပါတယ် … ။ ပစ္စည်းထည့်ပြီးပြီးချင်းလအနည်းငယ်မှာ ရာသီသွေးပေါ်ချိန် သွေးဆင်းများတာကလွဲလို့ … တခြား အန္တရာယ်မရှိပါဘူး … ။ သားအိမ်ထဲက ပစ္စည်းပြန်ထုတ်လျှင် ကလေးရနိုင်ပါတယ် …။
အဆိုးဆုံး … ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့ အခြေနေမှာ ဆက်ဆံမိသွားသေးလား … မပူပါနဲ့ …သောက်ဆေးတွေ ပေါ်နေပါပြီ … ဆက်ဆံအပြီး 72နာရီ အတွင်းပထမဆေးကို …သောက်သင့်တာပါ … ဒုတိယဆေးလုံးကိုတော့ 12နာရီအတွင်း ထပ်သောက်ရမှာပေါ့… ။ လူငယ်အချို့ တံဆိတ်မပြောပဲ သိကြပေမဲ့ … ဆေးသောက်ခြင်းကြောင့် ရာသီ သွေဖယ်ခြင်း … ရက်ကွာခြင်း … တစ်လကျော်ခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် … ။
ဒီလောက် ကာကွယ်နည်းတွေ မျိုးစုံရှိတဲ့ အထဲက မတော်တဆ ကလေးရသွားတာမျိုး မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး … ။ မီဒီယာတွေကနေတဆင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်သင့်ပါပြီ … ။ ဒါမှသာ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှူတွေ က ကာကွယ်ရာရောက်မှာပါ… ။ မိန်းမတိုင်းဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မို့ ရှက်စရမဟုတ်ပါဘူး …အသိပညာနည်းပါးမှူကြောင့် … နည်းလမ်းမမှန် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ကျပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူသားများကို စာနာသောအားဖြင့် မိမိသိရှိသော ဗဟုသုတများကို ဖြန့်ဝေကြပါစို့လားနော် ။
ကြိုဆိုပါတယ် .. တခုတော့ ရှိတယ် .. တလ ထိုးဆေးဆိုတာ
အဲဒါက နေ အရည်အသွေးပြည့် ဆေးခန်းတွေက ထိုးပေးတဲ့ တလ နဲ့ အပြင် တရုတ်က ၀င်လာလို့ ထိုးနေကြတဲ့ တလ မတူဖူး .. ဒါလေးကိုတော့ ခွဲခြားသိစေချင်ပါတယ် ..
ကွန်ဒုံးမှာလဲ ယောက်ျားသုံး ရှိသလို မိန်းမသုံးလဲ ရှိသေးတယ် ..
ယောက်ျားသုံးကို အိတုန် ရေးပြထားပြီးပြီ .. သူ့ကို လိင် တောင့်တင်းတော့မှ စသုံးရတာ ..
မိန်းမ ကွန်ဒုံးကျတော့ မိန်းကလေးက ကြို ထည့်ထားလို့ ရတယ် .. လိင်မဆက်ဆံဘူးသေးပဲ ပထမ ဆုံးအကြိမ် ဆိုရင်တော့ သုံးလို့ မရဘူး ထည့်လို့ မရဘူး .. နည်းနည်း လမ်းကြောင်း ပွင့်ထားပြီးတော့မှ ထည့်လို့ရတယ် .. ထည့်ရတာတော့ သိပ် မခက်ပါ ..
ရက်ရှောင်ဖို့ကျတော့ ရက်မှန်မှန်မလာတဲ့လူတွေအတွက် အခက်အခဲ ရှိတယ် ..
အိမ်ထောင်နဲ့ လူတွေကတော့ အချင်းချင်းညှိလိုက်ရင် အဆင်ပြေတယ် ..
အိမ်ထောင်တော့ မကျသေးပဲ လင်မယား မကျ ရည်းစားမက ဆိုတဲ့အတွဲတွေအတွက်တော့ .. သိပ်အရေးကြီးတဲ့ ခေါင်းစဉ်နော် ဖတ်ကြပါ မသိရင်လဲ မေးကြပါ .. နောက်များမှ ဖျက်ချလိုက်ရတယ်လို့ ကြားရရင် စိတ်မကောင်းပါ
မိန်းမ ကွန်ဒုံး ရှိတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ပါတယ် … သေချာတပ်ဆင်ထားလျှင် တစ်ဘက်လူတောင် မသိနိုင်ဘူးလို့လည်း ကြားခဲ့ဖူးတယ် … ။ ဒါပေမဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သိပ်မသုံးကြဘူး … အားနည်းချက်က ကျွံပြီး သားအိမ်တွင်းဝင်သွားနိုင်တာကြောင့်ပါတဲ့ .. ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး ။
သားအိမ်ထဲတော့ ကျွံမ၀င်နိုင်ပါဘူး .. (မိန်းမကိုယ်)ထဲကို အပြင်က ကွင်း (ဂွင်း) ကျွံဝင်သွားတာတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ် .. ဒါကလဲ အားကို အလွန်အမင်းအသုံးချမှပါ (အားတော့ နာပါရဲ့ သေချာအောင်လို့ ရေးပါရစေ) လိင်တန်ကို အပြင်ရောက်အောင် ထုတ်ပြီး အားသုံး စိုက်ထည့်တဲ့အခါမျိုးမှာသာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် .. အတွင်းမှာပဲ ရှိနေပြီး ဆက်ဆံရင် မဖြစ်တတ်ပါဘူး .. နောက်ပြီး ပေါက်ပြဲတာမျိုး မရှိလောက်အောင် ခိုင်ခံ့ပါတယ် ..
အော ဂလိုကိုး … ။ ဈေးကွက်ထဲမှာ လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ ရမရတော့ မသိပေမဲ့ … တစ်ချို့ဆို မိန်းမကွန်ဒုံးရှိမှန်းတောင် မသိဘူးလေ ..
ဆေးထိုးပြီးမှ ဝဖီးလာပြီး ဘဲဘဲကဖီးလ်းကွေးသွားမှာကို ဆင်ခြင်ဖို့ပါ
သူကဒီလိုအကြောင်းတွေမှာ Express ဖြစ်ပုံရပါတယ်
သူကလက်ရှိမှာ အပျိုကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီ ဘဲဘဲနဲ့ဆိုတော့
ဆေးထိုးတဲ့လူတိုင်း ၀တာတော့မဟုတ်ဘူးနော် …လူတိုင်းက ဆေးထိုးလျှင်ဝမယ်ပဲ ထင်နေကြတယ်။
(သူကဒီလိုအကြောင်းတွေမှာ Express ဖြစ်ပုံရပါတယ်
သူကလက်ရှိမှာ အပျိုကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီ ဘဲဘဲနဲ့ဆိုတော့)
ဒီမှာ အဘပု … ကျုပ်ကိုများစော်စော်ကားကား …
ဘဲရှိလို့ ဒီအကြောင်းတွေ သိနေတာမဟုတ်ဘူးဟေ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတစာတွေ လက်လှမ်းမှီသလောက်ဖတ်ထားလို့ဟ သိပီလား ။ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှူတွေ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ရှိနေတုန်းမို့ လူ့အသက် နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ ရေးထားတာ အိတ်ဆပတ်ဖြစ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး … ။ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမှာ အိတ်ဆပတ်ဖြစ်တာတော့ အိုဂျီမမတွေပဲ ။
72 hr pills ကို သုံးပြီး ခဏခဏ စရန်သပ်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေ လည်းရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစာစောင်တခုမှာ ဖတ်ဖူးတယ် အဲဒီ ၇၂ နာရီအတွင်းဆေးက အလိုမတူပဲ မုဒိန်းမှုမြောက်သွားတာကို ကိုယ်ဝန်မရစေချင်လို့ သုံးတာဖြစ်ပြီး တလွဲဆံပင်ကောင်းပြီး ခဏခဏ အလွယ်တကူ သုံးရင် မကောင်းဘူး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ ဘယ်နည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် သဘာဝတရားကို လွန်ဆန်တာမို့ တချက်မဟုတ်တချက် တခုမဟုတ် တခုနဲ့ ထိမှာပါပဲ။
အဲ့ဒီဆေးတွေကလည်း ၀ယ်ရလွယ်နေတော့ အလွယ်ဝယ်သုံးတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ပြောမဲ့သာပြောတာ 72နာရီဆေးတွေကလည်း … ဆိုက်အဖတ်ဒ် ရှိပြီး … ရာသီသွေဖယ်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တယ် … နောက်တခုက အဲ့ဒီဆေးလည်း ရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချလုိ့မရတာပါပဲ … ဆေးသုံးပြီး သန္ဓေတည်သွားတာ ကြားခဲ့ဖူးတယ် ။
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်လေးပါ ။ ဖတ်ပြီးမှာ ဗဟုသုတ အများကြီး ရလိုက်ပါတယ် ။ 72 hr က အမြဲ မသုံးသင့်ဘူး လို့ အသိဆရာဝန်တွေ က ပြောပါတယ် ။ ကွန်ဒုံးသုံးရတာ ကြတော့လည်း ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဖီးလ် မရှိသလို ပါပဲ ။ ထိုအခါ ရက်တွက်ရပါပြီ ။ လက်ထပ်ကြမှာသေချာတဲ့ အတွဲ တွေ အတွက် ကတော့ အပြီး ၅ ရက် လောက်ထိဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် လို့ ထင်မိပါတယ် ။ ၇ ရက် ဆိုတာ က မသေချာတော့ဘူး လို့ ပြောသံ ကြားဖူးလို့ ပါ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိသေးတာတွေ ကို သိခွင့်ရတဲ့ အတွက် etone ကို ရော ကွန်မင့်ပေးတဲ့ သူတွေ ကို ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ရက်ရွေးတာဟာ ရာသီ ရက်မှန်မှန်လာတဲ့လူအတွက်ပဲ ကောင်းတယ် .. ရက် ပြောင်းတတ်တဲ့လူ ဆိုရင် တခါစား တခါမိ ဖြစ်တတ်တယ် ..
အများအားဖြင့် ရာသီမလာခင် တပတ် လာပြီး တပတ်လို့ ဆိုပါတယ် ..
အကောင်းဆုံးကတော့ လက်မထပ်ခင် မကျူးလွန် သာပါ။ဖြစ်ပြီးသွား၇င်လည်း ဒီလို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတယ် ဗဟုသုတ မျိုး အများကြီး ဖြန့်ဝေသင့် ပါတယ်။ဒီအချက်တွေသိလို့အလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်တယ်လို့မထင် ပါဘူး။မရှောင် နိုင်တဲ့ အတွဲတွေကတော့ဖြစ်နေမှာ ပါပဲ။အဲဒီလို လွန် ကျူးပြီး ကလေးဖျက်ချသာအလွန်ဆိုးပါတယ်။
ဒီလောက် နည်းလမ်းတွေပေါနေတာတောင် ကိုယ်ဝန်၇ှိသွားတဲ့ သူတွေ အပုံကြီးပါ
ဒီတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမူတွေရှိလာတာပေါ့
အခုလို ဗဟုသုတရတဲ့ ပိုစ့်လေးကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဗူးပါ etone ရေ….
ကျွန်မ အမတစ်ယောက်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီး အခုထိ ကလေးမရဘူး … ဆေးစစ်တော့လဲ ဘာမှ မချို့ယွင်းဘူး … ဆေးစား ဆေးသောက် အမျိုးမျိုးလုပ်ပေမယ့်လဲ မရပါဘူး …
လူ့ပြည်က အပ်တစ်စင်းနဲ့ ဗြဟ္မာ့ပြည်ကအပ်တစ်စင်း ထိဖို့ မလွယ်သလို လူဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲတယ်တဲ့ …..
ဆေးစစ်တာ ကျား မ နှစ်ဦးစလုံး စစ်မှ ဖြစ်မယ် .. နောက်ပြီး အလုံးစုံ စစ်လို့ မရသေးရင် လူမင်းတို့လို .. ထွန်းအိန္ဒြာဗို တို့လို လုပ်ပါလား .. ဗမာပြည်မှာတော့ အိုဂျီ ဒေါ်မြမြ နဲ့ ဒေါ်မေသူမျိုးညွန့်တို့လဲ လုပ်တယ်လေ .. တောင်ငူက ဆရာဝန်တောင် ဒီလိုနဲ့ ကလေးရတာ အခုဆို (???? ၄ နှစ်) လောက်ရှိပြီ
ကိုပေတို့များတော့ အပ်ကို တောင်းလိုက် သွန်ချလိုက်သလား အောင့်မေ့ရတယ် ..
ကိုပေ နာမယ်တောင် ပြောင်းလိုက်ပီ ..
ကိုပေမျိုးအောင် တဲ့ ….
ဘကြီးပုက ဒေါက်တာအီးတုံးကို စော်စော်ကားကား…. ကိုယ့်အသက်မှ ကိုယ်အားမနာ၊ လူကဖြင့် သင်းချိုင်းကုန်းကို ခြေတလှမ်းလှမ်းနေပြီးတော့။ (မှတ်ချက်၊ ဘုံဆိုင်ပိတ်သွားသောကြောင့် သင်းချိုင်းနားမှချက်သော ဖောရှောအရည် သွားဝယ်ခြင်းဖြစ်၏)
မနှစ်ကဧပြီလ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးက.. ကိုယ်ဝန်တားဆေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးပဲ..။
မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာပြန်ပြီး ဆောင်းပါးရေးသင့်တယ် …။
Consider the contradictions: It was the first medicine ever designed to be taken regularly by people who were not sick. Its main inventor wasaconservative Catholic who was looking foratreatment for infertility and instead foundaguarantee of it. It was blamed for unleashing the sexual revolution among suddenly swinging singles, despite the fact that throughout the 1960s, women usually had to be married to get it. Its supporters hoped it would strengthen marriage by easing the strain of unwanted children; its critics still charge that the Pill gave rise to promiscuity, adultery and the breakdown of the family. In 1999 the Economist named it the most important scientific advance of the 20th century, but Gloria Steinem, one of the era’s most influential feminists, calls its impact “overrated.” One of the world’s largest studies of the Pill — 46,000 women followed for nearly 40 years — was released this March. It found that women who take the Pill are less likely to die prematurely from any cause, including cancer and heart disease, yet many women still question whether the health risks outweigh the benefits. (See “The Year in Health 2009.”)
That age has seen changes in social behavior that continue to accelerate. In 1960 the typical American woman had 3.6 children; by 1980 the number had dropped below 2. For the first time, more women identified themselves as workers than as homemakers. “There isastraight line between the Pill and the changes in family structure we now see,” says National Organization for Women (NOW) president Terry O’Neill, “with 22% of women earning more than their husbands. In 1970, 70% of women with children under6were at home; 30% worked. Now that’s roughly reversed.” (See TIME’s special on the state of the American woman.)
As long as people have been making little people, they’ve wanted to know how not to. The ancient Egyptians mixedapaste out of crocodile dung and formed it intoapessary, or vaginal insert. Aristotle proposed cedar oil and frankincense oil as spermicides; Casanova wrote of using halfalemon asacervical cap. The condom is often credited to one Dr. Condom in the mid-1700s, who was said to have inventedasheath made out of sheep intestines for England’s King Charles II to help limit the number of bastards he sired, though such devices had actually been around for centuries. (Watchavideo about the Pill’s importance.)
“The Pill was not at all what separated reproduction and sex among married people,” argues Harvard economist Claudia Goldin, who calls that “among the biggest misconceptions” about sexual behavior and the Pill. Long before its introduction, women already knew how to avoid pregnancy, however imperfectly. The typical white American woman in 1800 gave birth seven times; by 1900 the average was down to 3.5. (See TIME’s sex covers.)
But well into the modern age, contraception met with unified opposition from across the religious spectrum, Protestants and Catholics, Western and Eastern Orthodox. Sex, even within marriage, was immoral unless aimed at havingababy. Fear of pregnancy wasapowerful check on promiscuity — and information about contraception was treated as the equivalent of pornography. In 1873 Congress passedalaw banning birth control information as obscene. So women seeking ways to limit the number of children they bore had to know how to read the papers. Through the turn of the century, advertisements for potions to treat “female disorders” or menstrual irregularities carriedabold, bright warning: “Portuguese Female Pills, not to be used during pregnancy for they will cause miscarriage.”
Read more: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1983884,00.html#ixzz1S3AITeXT
အခု လိုသေချာတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မအိတုံရေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်မထပ်ခင် စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့နော်..
အဲဒီလို ဆေးပညာပေးပို.စ်လေးတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်…
¬ကဲချင်တိုင်းကဲကြပြီးတော့ ဆေးထိုးဆေးသောက်ကြတော့လဲ ကြောက်ကြပြန်ရော.. ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲလိုဆေးတွေကို အပျို၊လူပျို လူငယ်တွေ သွားဝယ်ရင် ၀ိုင်းကြည့်ကြတာနဲ.သေလောက်တယ်… အဲဒီတော့ ၀ယ်လဲမ၀ယ်ရဲ ကာလဲမကာကွယ်နဲ. ဒုက္ခရောက်ကြရော….
ပြီတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ကောင်လေး ဆီမှာ ကွန်ဒုံး တွေ.လို.ကတော့ ပြသနာရှာကြလေရော..
ဘာလို.လဲမသိ…(၀မ်းသာရမယ့် ကိစ္စကို များနော်….) အဲဒီတော့ ယောင်္ကျားလေတွေထက် မိန်းကလေးတွေကို အဲဒီလို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာကို ပိုပေးသင့်တယ်ထင်တယ်….
တည်းခိုခန်းဖွင့်ပြီး ၊ ကွန်ဒုံးရောင်းတဲ့ ဘစ်ဇနက်စ် များလုပ်လျှင် ကောင်းမလား တွေးမိဒယ်
တည်းခိုခန်းတွေကို အထင်မသေးနဲ့ .. အခု ၁၀၀% ကွန်ဒုံးစီမံချက်ကြောင့် တည်းခိုခန်းတိုင်းမှာ ကွန်ဒုံးတွေ အလကားဝေဖို့ စီမ့ထားတယ် .. သူတို့က ပြန်ရောင်းတာ မရောင်းတာ အပထား ကိုယ့်မှာ မပါလာဘူးဆိုရင် တောင်း/၀ယ်လို့ ရတယ် .. (ရယ်စရာလေး မှတ်ခဲ့ဖူးတယ် .. စီမံချက်တွေကို လိုက်လေ့လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြန်ပြောပြတာ .. တည်းခိုခန်း လှေကားရင်းမှာ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်နဲ့ ကွန်ဒုံးရယ် .. ချွတ်တဲ့အခါ လက်မပေစေဖို့ တစ်ရှူးရယ် .. လုပ်ငန်းမစခင် သန့်ရှင်းရေးအတွက် သုံးဖို့ စနိုးတာဝါရယ် ရှိတယ် တဲ့)
အဲလို ပညာပေးတွေကို များများနဲ့ ပွင့်ပွင့် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ရေစီးကြောင်းကို ပြောင်းလဲမှု့ကို ပိတ်ပင်မှု့ တားဆီးမှု့ထက်
ရှောင်ကျဉ် တားဆီး တာက အကောင်းဆုံးပါ။
အီးတုံး တို့ကတော့ လောဘတက်နေပြန်ပြီ။
သို့သော်လည်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကပြောင်းလာကြပြီဆိုတော့။
အရင်တုန်းကတော့ ၁၉၊၂၀ လောက်ဆို အိမ်ထောင်ပြုကြတာပဲလေ။
အခုတော့ ၂၇၊၃၀ လောက်ထိ အိမ်ထောင်မပြုပဲ လွပ်လပ်စွာလောကကြီးထဲ ပညာရှာရင်း
လေ့လာဆည်းပူးနေထိုင်ရင်းဆိုတော့၊ ၁၆၊၁ရ လောက်က စလာတဲ့ လောကသဘာဝ ဆန္ဒစိတ်ကို ထိမ်းဖို့ရာခက်တယ်လို့ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ လူကြီးဖြစ်နေပြီ။ အိမ်ထောင်သည်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပေမယ့် လူငယ်တွေ အမြင်နဲ့ နားလည်မှု ကျယ်ပြန့်စေချင်တာပါ။ နောက် မရှောင်နိုင်တဲ့အခါမှာ သေသပ်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့၊ မလိုလားအပ်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ဒီလို ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးတာ ကောင်းပါတယ်။
72 ဆေးက တစ်လကို အများဆုံး2ကြိမ် 3ကြိမ်လောက်ပဲ ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်…. အဲဒါဟုတ်ပါသလား? ခဏခဏ သုံးရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ?
အဲဒီဆေးက ပုံမှန် နေ့စဉ်သောက်ဆေးထက် အဆ များများ ထည့်ထားတာ .. သေချာသထက် သေချာအောင်ပေါ့ .. အချိန်နဲ့ ကွက်တိ သောက်ရင် အကျိုးရှိမယ် ပေါ့ ..
အဆ များများ ထည့်တဲ့အတွက် အပြစ်လဲ များများ ရှိတယ် .. မူးဝေအော့အန်တာက အစ ပေါ့ .. ဒါကြောင့် ဆေးပြင်းပြင်ကို ခဏခဏ သုံးရင် ဟိုမုန်း အပြစ်တွေ များများ ခံရမယ် .. နောက်ဆုံး .. ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အထိပေါ့ ..
ဂျပန်တီဗီတခုက.. ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့.. အထက်တန်းကျောင်းသူတွေ. အိပ်တွေ ရှောင်တခင်ဖွင့်စစ်ဆေးတာ… အားလုံးမှာ ကွန်ဒုံဆောင်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့.. ပြဖူးတယ်..။
ဒီနိုင်ငံက ဖွံ့ ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံမို့လို့ … အထက်တန်းကျောင်းသူမပြောနဲ့ …. အိမ်ထောင်သည် ယောကျာ်းတွေတောင် ကွန်ဒုံး ဆောင်ထားလျှင် အိမ်က မိန်းမ ကွိုင်ရှာခံရပြီမှတ်
ဒါနဲ့ သူတို့ ဆောင်ထားတာ ယောကျာ်းသုံးလား ၊ မိန်းမသုံးလား .. ။
အများအားဖြင့်တော့ ကျားကွန်ဒုံးပါ .. ကောင်လေးတွေ မေ့လာရင် သုံးဖို့
အဲ့ဒီအကြောင်း Dr.ဖြေလိမ့်မယ် … ဟီးဟီး … ဖတ်ရတဲ့စာတွေထဲမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရလိတ်တက် ဖီးဒ်က ဟာတွေ မပါဘူးလေ ။
ဆေးကို ဘယ်နေ့ထိုးတယ် .. သောက်ဆေးကို ဘယ်နေ့ သောက်တယ် .. ဘယ်နှရက်သောက်တယ် .. ဘယ်လောက်မှာဖြတ်လိုက်တယ် ဆိုတာကို သိရမှ ဖြေနိုင်မှာ
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်etone ရေ အခုလိုပို့စ်တင်ပေးတာကိုဘဲရှဲရှဲနီပါ
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိ၆လပိုင်း၁၀ရက်နဲ့ အခု ၇လပိုင်း၁၀ရက်ကြားထဲမှာ
ရာသီလာတယ် လို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ အောက်ခံလဲရလောက်အောင် ဆင်းဖို့ လိုမယ် .. တချို့က စွန်းထင်းရုံလောက်ကို လာတယ်လို့ ထင်နေတာ ဖြစ်မယ် ..
သာမန်အားဖြင့် စွန်းထင်းရုံလောက် ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ .. ဆေးထိုးနေကျ မဟုတ်တဲ့အခါမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထိုးထားတဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..
လဲရလောက်အောင် ဆင်းတယ် ဆိုရင် နည်းနည်း အရေးကြီးတယ် .. နေတဲ့နေရာပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးရုံပြသင့် ပြပါ .. ဝေးတယ် ဆိုရင် ထိုးပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကို ပြန် တိုင်ပင်ပါ ..
အင်း လူဖြစ်ဖို့ လူပြည်ကအပ်တစင်း ဗြမ္မာ့ပြည်ကအပ်တစင်းဆုံမှ ဖြစ်ရတာကို တားနည်းတွေက အများကြီးပါလားကွယ်..။
ဒေါက်တောတွေက ရွာထဲမှာရှိနေတော. အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ. စုံစုံသူငယ်ချင်းလေးလည်း အဆင်ပြေသွားပြီပေါ.နော်
အင်း အသုံးချတဲ. လူတွေက ကောင်းတော.လည်း ကောင်းတာပါပဲ အင်တာနက်ကြီးက
အခုတော. ရွာထဲမှာတော်တော်တောင် စည်ကားနေပြီ
ေ၇ွှဘိုသားလည်း ဘိန်းတော ဆရာဝင်လုပ်တော.မယ်
ဥထားတဲ့ဥကလေးတခု အီတုန် လက်ဦးသွားပြန်ပါပြီ
ရေးထားတဲ့စာစောင်က Healt Digest အတွဲ၈ အမှတ်၃၃
ဒီလို အဘနီရေ … IUD project လုပ်တုန်းက စပ်စပ်စုစု ကျွန်မလိုက်သွားဖူးတယ် … ။ ကိုယ်ထဲထည့်တာတော့ လူနာကို အားနာလို့ ၀င်မကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ … မထည့်ခင် နဲ့ ထည့်ပြီး မိန်းမတချို့ရဲ့ …….ရင်တွင်းစကားသံလေးတွေ ကြားခဲ့ဖူးလို့ ဒီစာလေး ရေးဖို့ စိတ်ကူးဖြစ်လာတာပါ … ။
၁၉၇၀ ၀န်းကျင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ AIDS နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကွန်ဒုံ အကြောင်းပညာပေးတော့ နားမလည်ကြသူတွေ (အထူးသဖြင့် နယ်ဘက်မှာ) အတွင် နားလည်အောင် နဘေစပ်ပေးလိုက်ပုံက…
ကိုမိုးညိုရေ….။ အဲဒါပေါ့ဗျာ ….။ အဲဒါကြီးပေါ့…။ 1990ခုနှစ်လောက်က ကျွန်တော် မင်းဘူးခရိုင်မှာ ၀န်ထမ်းလုပ်နေတုန်း နယ်မြေစိုးမိုးရေးစစ်ကြောင်းနဲ့ လိုက်ရတယ်…။ စစ်ကြောင်းကြီး ငါးကြောင်းဆိုကိုးးးးးဗျ…။ ကာကွယ်ရေး ဘဏ္ဍာရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး လူမှုရေးပေါ့…။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေက တစ်ဌာန တစ်ယောက်စီလိုက်ရတယ်…။ ကျွန်တော်က အလုပ်ဝင်ကာစ အရက်သမားပေါက်စ ရုံးထဲမှာမထားချင်လို့ အပြင်ထုတ်လိုက်တာ…။ အဲဒိမှာ ရွာတစ်ရွာရောက်တော့ တွေ့ရတာပဲဗျို့…။ ဘာလဲတွေ့လား ကွန်ဒုံး စွပ်ပါရက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာလို့တဲ့ဗျာ….။ ပြသွားတဲ့ဆရာမက လင်မယားဆက်ဆံချိန်မှာ ဒါလေးကို ဒီလိုစွပ်ရပါတယ်ဆိုပြီး ပြသွားသတဲ့…။ အဲဒိလိုစွပ်ပြီးလုပ်လိုက်တာပဲတဲ့…။ ဟာာ အဲဒါဆို ကွန်ဒုံးက ပေါက်သွားလား ဆွေးနေလို့လားပေါ့… ။ ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့… ။ သူတို့ ဟိုဟာ ပြုတိုင်း စိပ်တာပဲပေါ့….။ အဲဒိတော့ နေ၀န်းနီက မူးမူးနဲ့ နို့နေပါဦး ပေါ့ အကိုကြီးက ဘယ်လိုစွတ်သလဲ ကျွန်တော့ နမူနာပြပေါ့…။ ဒီဘက်လာဆိုတော့…။ နေ၀န်းနီနား ကပ်ပြီး စွပ်ပြရှာတယ်…။ သူစွပ်ထားတာက ဘယ်ဘက်လက်ညှိုးမှာ…။ ပြသွားတဲ့ ဆရာမလေးက သူ့ရှိတဲ့လက်ညှိုးစွပ်ပြတာ သူက လည်း လက်ညှိုးမှာစွပ်ရှာတာကိုးဗျ….။ ရွာသား သေသေချာချာ ဂဂဏဏ မမေးပဲ ဒါလေးစွပ်ထားရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ထင်နေရှာတာ နေရာလွဲနေတာမသိရှာဘူးလေ…။ ဆရာမက ဖြေမ စွပ်ပြသွားရင် သူလည်း ခြေမလိုက်စွပ်မဲ့သဘောရှိတယ်..။ ကွန်ဒုံး ခေတ်ဦးပေါ့…။ ရယ်စရာလေးပါ..။ တစ်ချို့ကလည်းပြောကြတယ်…။ ဒါကြီး စွပ်ထားရတာက နွေခေါင်ခေါင် အနွေးထည်ကြီး ၀တ်ပြီး ကန္တာရထဲ သွားရသလိုပဲတဲ့…။ ဘယ်လိုမှပြောမရဘူး…။
ခိုးစားလို့ကတော့များသောအားဖြင့်တခါခိုးတခါမိတာပါပဲ။ အိမ်ထောင်သည်တွေတောင်ဒီလောက် တားနေ တဲ့ကြားက ကလေးတွေတိုးတိုးလာလို့ဂွကျနေတာ။ ဒီကိစ်စကပြောသလောက်မလွယ်ဖြစ်နေရတယ်။ ရိုးရှင်းပေမဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ ကိစ်စများမြောင်လူတို့ဘောင်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်။
အစ်မပြောသလိုပါပဲ ..ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ နှစ်မျိုးပဲ ရှိပေလို့ပဲ .. သုံးလေးမျိုးသာ ရှိလျှင် ဒီထက်ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးမယ် ထင်ပါရဲ့  …
အထက်တင်ပြတာတွေအပြင် ဆီးကျင်တာ တို့ အောင့်တာတို့လည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်
ရာသီသွေး မမှန်တာတို့ ခဏခဏသောက်နေရင်
နောက် အိမ်ထောင်ပြုရင် ကလေးမရနိုင်တာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယဒီဆေးက တချို့ဆို
အော့အန်တတ်ပါတယ် အညွှန်းအတိုင်း ထပ်သောက်ရပါမယ်
သုံးဖူးသူတွေပြောပြတာပါဆရာဝန်ပြောတာက ပို တိကျပါလိမ့်မယ်
100 % နှုန်းတော့ ဘယ်နည်းမှ စိတ်ချရတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ။
ကွန်ဒုံးတောင် 98%ပဲ စိတ်ချရတယ်လို့ရေးထားတယ် ။
ကျန်းမာရေးအသိတွေများများရှိလျှင်တော့ ကြိုရှောင်နိုင်ကြမှာပေါ့ ။